Ny diabeta eto Madagasikara
Ny diabeta /
Ireo sokajy sy karazana diabeta
Araka ny nahitana azy hatrany am-boalohany dia hita fa misy karazany tokoa ny diabeta izay misokajy ho toy izao :
1. Sokajy 1 (Diabète type 1) :
* Eo amin'ny ankizy sy ny adolantsento ary manomboka eo amin'ny maha olon-dehibe no ahitana ity karazany ity matetika, tsy toy izany kosa eo amin'ny zokiolona. Ny 10% ny olona diabetika dia Type 1 avokoa. Nantsoina ihany koa hoe insulinodépendant izy io taloha. Manamarika ity karazany ity ny tsy fisian'ny insuline mihitsy eo amin'ny vatan'ilay olona. Noho izany, ilaina ny mampiditra insuline avy aty ivelany ho an'ilay diabetika.
* Ny antony :
Manaranaka ny diabeta ary anisan'ny antony mahatonga ny diabeta izany. Eto dia ny sela mpamokatra insuline ao amin'ny sarakaty (celulles bêta) no simba, ary izany fahasimbana izany dia miombo tsikelikely mandritra ny taona maro. Tsy fantatra hatreto hoe inona no mahatonga izany na rahoviana izany no mitranga araka ny voalazan'ny manam-pahaizana dia anisan'ny mandray anjara betsaka amin'io fahasimbana io ny tontolo iainana sy ny fandovana avy amin'ny ray aman-dreny (prédisposition génétique).
=>Noho izany ny olona diabetika sokajy 1 dia TSY MAINTSY MITSINDRONA INSULINE ISAN'ANDRO mba ahafahany mivelona, nohon'ny tsy fahafahan'ny vatany mamorona insuline intsony.
2. Sokajy 2 (Diabète type2) :
* Ny diabeta Type 2 no mandrafitra ny 90% ny olona diabetika. Eo amin'ny olon-dehibe sy ny zokiolona no tena ahitana azy (40 taona no mihotra). Nefa indrisy tato ho ato fa nanjary hita amin'ny ankizy sy ny tanora ihany koa izy.
* Fahita matetika eo amin'ny olon-dehibe izy ity. Zara raha mamokatra insuline ny sarakaty na mamokatra ihany fa voaelingelina ny fiasany (izany hoe voasakantsakana ny asany). Noho izany, tsy ampiasain'ny vatana ara-dalàna intsony ny siramamy azo avy amin'ny sakafo ka manjary miakatra ny tahan'ny siramamy ao anaty rà ka mahatonga ny hyperglycémie.
* Ny fisorohana dia tsotra :
Raha mahay manova fomba fiaina ny olona iray diabetika dia na ny olona iray mbola tsy diabetika dia azo atao tsara ny misoroka azy na koa ny misoroka ny tsy hisehoan'ireo voka-dratsy aterany (SAKAFO, FAMPIASANA VATANA, FANAFODY).
Mety ho voany
Ny mahatonga azy
Famantarana sy fisehony
Ny fomba fisakafo
Ireo vaovao misongadina
Raha hanolotra fanampiana ho an'ny diabetika malagasy ianao.